Dingana hamoronana CV mahasarika: Dingana hamoronana Resume tsara | Creatives Online
Nerea Morcillo | | General, Cheats
Amin'izao fotoana izao dia maro ny olona mila curriculum vitae mifanaraka amin'ny safidiny sy ny toetrany. Ny resume tsara dia tsy vitan'ny hoe hahatonga azy ireo hahatsikaritra anao bebe kokoa, fa azonao atao koa ny manatratra a sary tonga lafatra sy manintona miaraka amin'ny tanjona rehetra hotanterahinao.
Amin'ity lahatsoratra ity dia tsy hamindra anao amin'ny toeram-piasana sy ny fahafaha-manaony fotsiny izahay, fa hasehontsika anao indrindra, ny fomba hanatanterahana izany rehetra izany amin'ny alàlan'ny famoronana curriculum vitae.
Amin'ny dingana tsotra vitsivitsy azonao atao ny a mombamomba mahomby.
1 Ny curriculum vitae
1.2 Mety lesoka
1.3 Karazana resume
2 Dingana manaraka
2.1 Farito ny mombamomba anao tsara
2.2 Ampidiro ny mombamomba ny fifandraisana
2.3 Ampio ny fahaizanao manokana
2.4 Hamafiso ny CV anao
2.5 Tehirizo ny asanao teo aloha
2.6 Tsipelina sy tonony
2.7 Ilay sary
Ny curriculum vitae
Loharano: Computer Hoy
Ny curriculum vitae na CV amin'ny fanafohezana azy dia antontan-taratasy ampiasaina ho fitaovana hanehoana fifandraisana mazava sy mazava ny angon-drakitra, ny fahaiza-manao ary ny traikefan'ny olona iray, miaraka amin'ny fikasana ho voafantina amin'ny dinidinika momba ny asa.
Mba hahatakaranao azy bebe kokoa dia mitovy amin'ny dokambarotra na fanasana tsara alefa na aterin'ny mpangataka asa izy io, izay ahitana ny fampahalalana rehetra momba ny fiainany miasa, ny fampahalalana momba ny fifandraisana ary manondro ny toerana misy azy. Ny tanjon'ny resume dia ny hamorona a fahatsapana tsara sy fahalianana mba hampahafantarana ny tenanao ary amin'izany dia mahazo dinidinika manokana, miafara amin'ny fahazoana io asa irina io.
Ny angon-drakitra manokana dia tsy maintsy ampidirina ao amin'ny curriculum vitae, raha te hanao bebe kokoa mora vakina sy azo iza ianao, ny fomba hifandraisana aminao ary ny zavatra nataonao tato anatin'ny taona vitsivitsy.
Anisan'ireo angona manan-danja indrindra dia:
Anarana sy anarana.
Daty sy toerana nahaterahana.
Ny toerana misy anao.
Laharana fifandraisana, roa farafahakeliny.
Adiresy mailaka manokana idiranao matetika.
Ny fanadihadiana natao dia manondro ny daty fanombohana sy fiafarana, ivon-toeram-pianarana, ary ny toerana nanaovana azy ireo.
Ny cours, cours na atrikasa momba ny diplaoma dia natao ihany koa manondro ny daty fanombohana sy fiafarana, foibe ary toerana nanatanterahana azy ireo.
Traikefa matihanina manondro ny daty fanombohana sy fiafarana, anaran'ny orinasa ary asa vita.
Fiteny fehezinao ary amin'ny ambaratonga mifanaraka amin'izany.
Izany ny lohateny na "Curriculum Vitae": raha tianao hisongadina amin'ny sisa ny CV-nao dia aleo asiana lohateny manaitra kokoa.
Làlan'ny elektronika namany Sary tsy mety: mamorona mailaka tsotra sy matihanina.
ny fahadisoana tsipelina: Iray amin'ireo fahadisoana ratsy indrindra azonao atao izany. Ataovy azo antoka fa manoratra tsara ny zava-drehetra ianao.
Manaova CV ho an'ny rehetra: Ny ankamaroan'ny olona dia mampiasa resume mitovy amin'ny fandefasana asa rehetra. Tsy maintsy ampanjifainao ny CV ho an'ny toerana tsirairay.
tena be: ny hoe misy pejy 4 ny curriculum vitae dia tsy midika izany fa tsara kokoa. Ampio ny fampahalalana manan-danja indrindra.
Mampiasà a fiteny sarotra vakina: aza mampiasa fanafohezana maro, neologism, teknika, sns. Tsy maintsy mampiasa fiteny tsy miandany koa ianao.
Ampidiro ny antsipiriany izay tsy mifandraika: Tsy ratsy ny manoratra ny fialambolinao fa raha tsy mitondra na inona na inona izy ireo dia aleo tsy mametraka izany.
KOA famoronana: Raha olona mahay mamorona ianao dia tsy ratsy ny mampiseho izany ao amin'ny CV-nao, fa tokony hialana amin'ny fanerena be loatra amin'ny fampiasana endri-tsoratra, loko ary hafa.
tsy fifankahazoanaAlohan'ny handefasana ny resume dia diniho tsara ny daty hanamarina fa marina amin'ny tantaran'ny asanao izany. Ny resadresaka tsy mifanaraka dia miteraka ahiahy maro, izay mety hitarika anao hanilika anao amin'ny dingana fifantenana.
Tsy misongadina ny zava-bitanao: tokony hampidirinao ny zava-bitanao, fa tsy miavonavona loatra.
Asio diso ny angon-drakitra- Hamarino raha voasoritra tsara ny laharanao sy ny adiresy mailakao. Na dia kandidà tsara ho an'ny toerana aza ianao raha diso ny fampahalalana momba ny fifandraisanao dia very ianao.
tena tsotra: Raha manana zavatra tsara aseho ao amin'ny CV-nao ianao dia apetraho fa tsy manapaka ny tenanao.
endrika aburrido: Tsy tokony ho mahay mamorona ianao, fa tsy mamorona mihitsy. Mitadiava endrika manintona ny saina ary manana antsipiriany mamorona mifanaraka aminao, mampiseho ampahany amin'ny toetranao.
tanjona mazava: tsy maintsy manazava ny tanjonao ianao, mampifantoka azy ireo amin'ny filan'ny orinasa.
samy hafa dikan: Mampiasà dika CV iray ihany, ary io no mahasarika indrindra sy mifanaraka amin'ny toetranao.
Miankina amin'ny karazana resume dia azo amboarina amin'ny endrika samihafa. Anisan'izany ireto manaraka ireto:
fandehan'ny fotoana: io no fandaharam-pianarana izay arindran'ny daty ny traikefa arak'asa rehetra. hatrany am-piandohana ny toerana farany niasanao. Mahafinaritra anao ny mampiasa azy raha manana traikefa kely na tsy manana traikefa ianao ary mila CV fohy.
Avereno ny fanisan-taona: io no be mpampiasa indrindra, variana amin'ny CV teo aloha. Na dia miova aza ny filaharana tokony hampidiranao traikefa matihanina, amin'ity tranga ity dia tsy maintsy manomboka amin'ny traikefa matihanina farany indrindra ianao ka hatramin'ny tranainy indrindra. Ampiasaina rehefa nitovitovy sy tsy miova ny toerana voatana rehefa mandeha ny fotoana.
Fanisan-taona miasa: ny traikefa dia sokajiana araka ny toerana sy toerana misy azy isaky ny tranga. Tsy maintsy mampiasa azy ianao raha efa nitana toerana 2 na mihoatra fa any amin'ny orinasa samihafa
Mifangaro: izy io dia fitambaran'ny fandaharam-pianarana miasa sy ara-potoana. Izy io no tena aroso ary iray amin'ireo be mpampiasa indrindra, satria milamina kokoa sy mora jerena.
Creativo: Ity karazana resume ity koa dia nampiasaina betsaka tamin'ny taon-dasa. Manaova fiovana indrindra raha mihatra amin'ny sehatra toy ny famolavolana, ny famoahana ary ny karazana asa famoronana ianao, ka manome topimaso kely momba izay azonao atao.
Zava-dehibe ny mitandrina tsara amin'ity lahatsoratra ity, satria araka ny efa nolazaintsika teo aloha, ny CV voarafitra tsara dia afaka manampy anao hahita ny asa nofinofinao. Tokony ho fantatrao fotsiny izay holazainao. Araho ireto dingana ireto izay hampisehoanay anao ny fomba fanaovana resume manintona.
Farito ny mombamomba anao tsara
Ny mombamomba ny matihanina dia misy fehezanteny fohy manasongadina ny traikefanao taloha momba ny asa sy ny fifanarahanao ambony amin'ny fahabangan-toerana hita ao amin'ny tolotra asa. Izany dia tokony ahitana ny lohateninao na ny toerana misy anao, ny fahaiza-manao ilaina ary ny fahaiza-manao mety amin'ny asa.
Ampidiro ny mombamomba ny fifandraisana
Ny fampahalalana momba ny fifandraisana dia iray amin'ireo fizarana manan-danja indrindra amin'ny CV anao. Ny ankamaroan'ny mpampiasa dia manoro hevitra ny hampiditra ny anaranao feno, ny laharan-telefaonanao ary ny adiresy mailakao. Ataovy azo antoka fa tsy misy lesoka ao amin'ity fizarana ity ary ny fampahalalana momba ny fifandraisanao dia vaovao.
Ampio ny fahaizanao manokana
Amin'ity dingana ity dia mila manao a famakafakana ny toetranao manokana hamantarana izay fahaiza-manao mahatonga anao ho sahaza kokoa amin'ny toerana. Ohatra, ny zava-misy tsotra eo amin'ny toerana hifandraisana amin'ny mpanjifa, angamba ny fahaiza-mamorona anao dia tsy dia manan-danja loatra, raha ny fahatsapanao ny andraikitra sy ny filaminana. Miezaha ho tanjona araka izay tratra mba hahafantaranao ny fahaizanao sy ny fahaizanao.
Hamafiso ny CV anao
Firona maro Mampiasà rafitra fanaraha-maso ny mpangataka hijerena ny CV alohan'ny hamakian'ny mpikarama. Ireo rafitra mandeha ho azy ireo dia afaka mikaroka teny manokana izay nampidirinao tao amin'ny CV anao. Raha tianao ny hampandalo ity sivana voalohany ity ny mombamomba anao dia ataovy izay manaraka ireto dingana ireto:
Alefaso amin'ny endrika .DOC ny CV-nao fa tsy endrika .PDF.
Asio fampahalalana manan-danja ao amin'ny lohapejy na tongotra.
Alamino ho bala ny lahatsoratra.
Mampiasà teny fanalahidy manerana ny antontan-taratasy.
Inona no tokony ho fantatrao. dia azonao atao ny mamakafaka ny famaritana ny toerana ampiharanao ary mikaroka amin'ny LinkedIn amin'ny mombamomba mitovy amin'izany mba hahafahanao mamoaka teny fanalahidy sy mampiasa azy ireo amin'ny CV.
Tehirizo ny asanao teo aloha
Ny fahabangan-toerana sasany dia mampindrana ny tenany mihoatra noho ny hafa amin'ny fanolorana ohatra. Raha miasa ianao, ohatra, amin'ny indostrian'ny famolavolana, ampidiro amin'ny CV anao Portofolio misy santionan'ny talentanao na ampidiro ny rohy raha manana portfolio nomerika ianao. Amin'ny Behance dia afaka mamorona ny kaontinao ianao mba hampidirana ohatra amin'ny asanao mora sy maimaim-poana.
Tsipelina sy tonony
Tandremo fa tsy misy hadisoana tsipelina ny resume anao. Raha manana fisalasalana momba ny teny iray manokana ianao dia afaka maka hevitra amin'ny mpitsikilo tsipelina misy amin'ny Internet. Raha manoratra CV amin'ny teny anglisy ianao dia jereo koa ny tsipelinao ary ezaho karakaraina ny tononkalonao iresahanao amin'ny hafa. Tena zava-dehibe ny hahitan'ny hafa ny sarin'ny lahateninao.
Ary farany fa tsy ny kely indrindra, dia ilaina ny manana sary mombamomba izany dia miloko, tsy misy scratches na pixel eo anelanelany ary azon'ny hafa fantarina hoe iza ianao. Amin'izany dia tsara kokoa ny mampiasa lafika fanamiana, na lafika monochrome izay tsy misy hafa misongadina afa-tsy ianao.
Raha tonga amin'io teboka io amin'ny lahatsoratra ianao dia manasa anao izahay hanomboka hanoratra ny resume mifototra amin'ny fika natolotray anao.
Ankehitriny dia afaka mirary soa ho anao izahay amin'ny lalanao mankany amin'ny fahombiazana!
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Dingana hamoronana CV mahasarika
daniel balaguer dia hoy izy:
Lahatsoratra tena tsara, na dia tsy maintsy dinihintsika aza fa ny fanomezana angon-drakitra manokana toy ny ID, miaraka amin'ny anarana feno sy ny adiresy feno dia mety hitondra antsika, ohatra, ny olana amin'ny halatra maha-izy azy raha toa ka miditra amin'ny tanana diso io CV io na zaraina tsy an-kanavaka.
Tsara ny tsy manome ny DNI na ny adiresy feno. Raha tonga amin'ny tafatafa isika dia efa hanontaniana antsika izy ireo na ho afaka hanamora azy ireo isika
Valiny an'i Daniel Balaguer
Ahoana ny fampifangaroana sosona amin'ny Photoshop